Caabuqa COVID-19 Iyo Sidii Looga Illaalin Lahaa Dadka Ku Xidhan Saldhigyada Booliska Iyo Xabsiyada |
Hargeisa(GNN):-Shalay, Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu qaaday tallaabo lagaga gaashaamanayo caabuqa Adduunkii ku faafa yee COVID-19. Kadib markii la xaqiijiyey in kiisas caabuqan ah laga helay Itoobiya, Soomaaliya iyo Kiiniya.
Madaxweynuhu waxa uu amray in la xidho dugsiyada, waxa uu mamnuucay goobaha ay bulshadu ku kulmaan, sidoo kale waxa oo xadiday isu-socodka illaa bisha soo socota si bulshadu ay u badbaado.
Tallaabooyinkani waxa ay mudan yihiin in la bogaadiyo. Sidoo kale waxa aanu kula talinaynaa Madaxweyne Bihi in uu tallaabo degdeg ah ka qaato sidii loo illaalin lahaa dadka ku xidhan saldhigyada booliska iyo xabsiyada Somaliland.
Dadka xabsiyada ku jiraa aad ayay ugu nugul yihiin caabuqan Adduunka ku faafaya.
Somaliland, dadka ku jira xabsiyada iyo saldhigyada booliska waxa lagula xidhaa qolkiiba tobonaan qof oo kale, kuwaas oo ay adagtahay in ay helaan agabkii nadaafadda ee aasaasiga ahaa sida saabuunta iyo biyo nadiif ah.
Haddii mid ka mid ahi xanuunsado, dadka kale ee goobta jooga oo ay ku jiraan saraakiisha booliska iyo ciidanka asluubta, iyo sidoo kale dadka soo booqanayaaba waxa ay halis aad ah ugu jiraan in ay qaadaan xanuunka. Tani waxa ay dhici kartaa haddii qof qaba caabuqan coronavirus uu soo galo saldhigyada booliska ama xabsiyada.
Waxa uu si xawli ah ugu faafi doonaa bulshada. Iyada oo aynu ogsoonahay in ay dadku galaan kana baxaan saldhigyada iyo xabsiyada si joogto ah, xanuun kasta oo ka dillaacaa waxa uu si dhakhso ah ugu faafi doonaa bulshada.
Waddamada uu ka dillaacay COVID-19 waxa ay qaateen tallaabooyin ay kaga hor-tegeyaan halistan iyaga oo yareeyey tirade dadka xidhan. Iran waxa ay dammaanad ku sii deysay 85,000 oo maxbuus, gaar ahaan kuwii aan loo heysan denbiyada waaweyn ee muddada gaaban lagu xukumay. Maraykanka, waxa lagu amray saraakiisha booliska ee gobollada qaar in ay qof xidhaan oo ay xabsiga u taxaabaan kaliya haddii laga maarsan waayo.
Hay’adda Horizon waxa ka go’an dhawrista shaqaalaheeda iyo dadka ay u adeegto, waxaana la faray shaqaaluhu in ay kasoo shaqeeyaan guryahooda illaa hadda.
Shaqaalahayagu waxa ay bixin doonaan adeeggii kaalmada sharci ee ay u fidin jireen dadka xidhan iyo qoysaskoodaba iyaga oo isticmaalaya telefoonadooda.
Waxaaanu ku boorinaynaa Madaxweyne Biixi in uu soo rogo tallaabooyin kale oo deg-deg ah isaga oo amraya in lagu sii daayo dammaanad shardi ku xidhan maxaabiista aan geysan danbiyada culus, gaar ahaan haweenka uurka leh iyo maxaabiista marka horeba xanuunsanayey, iyo in lagu amro booliska in ay soo xidhaan kaliya dadka danbiyada halista ah geysta. Saabuun dheeraad ah waa in la gaadhsiiyaa dhammaan saldhigyada booliska iyo xabsiyada.
Tallaabada hadda la qaadaa waxa ay badbaadinaysaa dadka xidhan iyo guud ahaan bulshada.